नेता जोशीको स्वास्थ्यमा शनिबारको तुलनामा निकै सुधार : अस्पताल
नेपाली कंग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुन थालेको छ ।
शुक्रबार बिहान मष्तिष्कघात भई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका नेता जोशीको आईसीयूको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार जारी राखिएको अस्पतालले जनाएको छ । शनिबारको तुलनामा उनको स्वास्थ्य अवस्था आइतबारसम्ममा निकै सुधार देखिएको उपचारमा संलग्न न्यूरो सर्जन डा. राजीव झाले जानकारी दिए ।
झाका अनुसार शनिबारभन्दा आइतबार नेता जोशीले दाहिने हात र खुट्टा बढी चलाएका छन् । जोशीलाई आइतबार बिहानदेखि नै बेहोस् पार्ने औषधि दिन छाडिएको छ । तर, पनि उनले आँखा भने खोलेका छैनन् ।
यस्तै, आइतबार जोशीको सिटी स्क्यान पनि गरिएको छ । जसअनुसार उनको टाउकोमा जमेको रगत र रक्तमिश्रित पानीसमेत लगभग सफा भएको पाइएको अस्पतालले जनाएको छ ।
‘उहाँको अवस्था अझै खतरामुक्त भने छैन,’ डा. झाले भने, ‘उहाँको अहिलेको अवस्थालाई जटिल, तर सुधारोन्मुख भन्नुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन १६, २०७७, १४:४३:००
लहान डकैती : जिप र सुनचाँदी भेटियो, डाका समूह अझै फरार2min read
झण्डै २ करोडको लागतमा शीत भण्डारगृह बनाउँदै सैनामैना नगरपालिका 1 min read